११ सर्वश्रेष्ठ देखिने श्रद्धा कपूरको वार्डरोबबाट चोरी गर्न - सेलेब स्टाइल
११ सर्वश्रेष्ठ देखिने श्रद्धा कपूरको वार्डरोबबाट चोरी गर्न
२०१० को शुरुआतदेखि श्रद्धा कपूर बिस्तारै बलिउडमा आफ्नो छाप छोडिदैछिन्। डिवाको केटी-अर्को-ढोकाको संवेदनशीलता हामीमा बढिरहेको छ जबदेखि उनले पहिलो पटक उद्योगमा प्रवेश गरे। जहाँ उनी धेरै अभिनय उपलब्धिहरू र बहुमुखी प्रतिभाका लागि परिचित छिन् जुन उनी कुनै पनि भूमिकामा मिल्दोजुल्दो छ, स्पन्की स्टारले पनि आफ्नो अनुग्रह र भव्यताका साथ फेसन सर्कलमा आफ्नो छाप छोडिदियो।
जसरी उनी विकास गर्न र हृदयहरू जित्न जारी रहन्छ, उनको फेसनको आकर्षण भावना पनि उच्च भयो। उनको व्यक्तिगत शैली सबै रमाईलो, क्वार्क र आरामदायक सिल्हूटहरू हुन् जुन उनको बबली व्यक्तित्वमा प्रतिबिम्बित हुन्छन्। उनको स्टाइल गाईडमा द्रुत हेराईले प्रमाणित गर्दछ कि उनको अलमारी क्याजुअल पोशाक, ब्रीजी कुर्ता, फन कोर्डिनेट्स, पार्टी-तयार नम्बरहरू र डिकडेन्ट लेहेंगाको आदर्श मिश्रण हो, तर उनी स्पष्ट रूपमा लुगाहरूका लागि विशेष ठाउँ हुन्छन्। उनको उत्कृष्ट दर्सा र सनसनीखेज फेशन सेन्स प्रामाणिकता र न्यूनतावादको मिलन हो। यसबाहेक, उनी सँधै उनको पोशाकमा सहज र सहज राख्छन् उनको फेसन खेलमा व्यक्तित्व थप्न।
जोखिम उठाउँदा डराउन नखोज्नुहोस्, हामीले धेरै बर्षहरूमा उसलाई धेरै अवतारहरूमा देख्यौं। यो सडक शैली हो वा रातो कार्पेट घटनाहरू हो, श्रद्धाले सँधै उनको उत्तम फेशन खुट्टा राख्दछ र हामी भविष्यमा यो आशाजनक तारा लिने ठाउँमा कुर्दैनौं। यदि तपाईंलाई भविष्यको लागि आफ्नो वार्डरोब अपग्रेड गर्न आवश्यक छ भने, अगाडि नहेर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो सबैभन्दा मनपर्ने डिभाको मनपर्दो लुकहरू छन्।
हामीलाई हप्ताकै सब भन्दा ग्लैमरस लुक दिँदै श्रद्धा कपूरले अदनभिकले कालो मखमली गाउन हल्लाए। प्रेरणाको लागि एक लग्ज मिति रात नम्बर?
परम्परागत मार्ग लिई, शारधा क्यानरीको पहेंलो अर्पिता मेहता साडीमा घामको किरणमा देखिन्। स्टाइल टिप: सूंग भारतीय उपकरणहरू जस्तै म a्ग टीका र बाटवा थप गर्दा यसले पारंपरिक टच थप्न मद्दत गर्दछ!
उनी आफैंमा ब्यक्ति को # COOLGIRL को रुपमा प्रकट भई, शारधाले पंकज र निधि डेनिम वार्प नम्बरको फिल्मको प्रमोशनको लागि रोजिन्।
जटिल कढ़ाई र नारी विस्तृत शैलीहरूको लागि उनको प्रेम प्रमाणित गर्दै अभिनेता गौरी र नैनिका पहिरनमा आश्चर्यजनक देखिन्।
उत्सव चियर्सलाई भित्र ल्याएर, श्रद्धाले हामीलाई उल्लेखनीय पन्ना हरियो अनिता डोंगरे लेहेंगा सेटमा मोहित गरिन्।
ग्रीष्म inspiredतुमा प्रेरित ड्रेसिंगको कलामा पोख्त, शारदा जुडी झाhang र मनपर्दो स्कर्ट कम्बो द्वारा क्रप गरिएको ज्याकेटमा एकदम चम्किलो देखिन्। # BRUNCHREADY
बोल्ड हेड-टू-टू-ट्यूटि कालो नम्बर प्रत्येकका लागि होइन। डिभा BLSSD असमानमित पोशाकको छनौट गर्दा भयानक देखिन्थ्यो। प्रो सुझाव: तपाईको लुकलाई सहजै उन्नत गर्नका लागि जाँघो-जुत्तासँग जोडा मिलाउनुहोस्।
हर्न भन्नुहोस् डेनिमका पोशाकहरूलाई डबल-लेयर्ड रफलहरू जस्तै शारधाको रूपमा टर्न टर्न बनाउन। अतिरिक्त ध्यानका लागि स्टेटमेन्ट हूप सहितको सामानहरू।
भेलवेटले समग्र देखिन कुनै चीजको लागि विलासी अनुभव थप्न मद्दत गर्दछ। शार्धाबाट नोटहरू लिनुहोस् कसरी चीजहरूलाई न्यूनतम तर उत्तम दर्जेका राख्न!
भिक्टोरियन युगको श्रद्धा, श्रद्धा कपूर लिली लुलुले डिजाइन गरेको बटनको पोशाकमा लुकिरहेकी देखिन्।
के हामी केवल भन्न सक्छौं कि शार्धा जस्तो कसैले पनि गर्न सक्दैन? अवधि ताराले पोइन्टमा कडा केस बनाउँदछ ब्रोकड क्रप शीर्ष र चौडा-खुट्टा ट्राउजर जोडी सम्झौता चोर्न।
यो पनि पढ्नुहोस्: गोल्डन ग्लोब २०२१: सर्वश्रेष्ठ रेड कार्पेट देखिए
कपाल बढाउनको लागि सजिलो सल्लाह
स्थायी रूपमा कपाल हटाउन को लागी घरेलु उपचार
कसरी तस्बिरहरूको साथ पेट बोसो व्यायाम कम गर्न